Xiisadii siyaasadeed ee Jigjiga miyey dagtay mise waa la isku maqan yahay? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Xafiiska Ra'iisul wasaarha Itoobiya
Image caption Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xafiiskiisa ku qaabilay Madaxweyne Mustafe iyo Axmed Shide
Khilaafkaasi ayaa waxaa uu horseeday in madaxweynaha deegaanka iyo Axmed Shide ay labaduba iska xaadiriyaan magaalada Addisababa, halkaais oo ay kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Inkastoo aan war rasmi ah laga helin waxyaabihii ay ka wada hadleen Abiy Axmed, Axmed Shide iyo Mustafe Cagjar ayaa haddana war kooban oo lasoo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu sheegay sidatan.
"Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa kullan wadatashi ah la qaatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafe Muxumed Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide. Wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihii horumarka iyo ammaanka gobolka, waxaan Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay wada shaqeyn doonaan, si loo xoojiyo horumarka deegaanka" .
''Waxa la isku hayo waa awoodaha iyo sidii loo maareyn lahaa, ra'iisul wasaraha dalkana waxaa muuqata in uu yiri waxa la isku hayo soo khilaafka xisbiga ma ahan? Haa, doorashada xisbiga dhaqso hala qabto, waxaana hadda muuqato in doorashadii la isku diyaarinayo".Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ciid Badal Maxamad oo ka faaloda arrimaha siyaasadda geeska Afrika.
Inkastoo aanan lagu dhawaaqin xiliga la qabanayo doorashada xisbiga ayaa waxaan la ogeyn cida kamid noqoneysa xubnaha xisbiga iyo qaabka loo wajahayo arrintasi oo xaaladda degenaasho la'aan ka dhalisay deegaanka.